Tilmaanta luminta Fatxiga dhulka hoostiisa ee laga mamnuucay Amazon - Rebates Fitness
Home » eBook » Tilmaamaha Khasaaraha Dhimashada ee Dhulka Hoostiisa ka Mamnuucay Amazon
Ma ogtahay qaadashada asbiriin cunugga 3 jeer maalintii ay dhab ahaantii kordhin karto nidaamka dheef-shiid kiimikaadkaaga? Ama adoo calaacalaya hal gabal oo ah xanjo nikotiin ah, runtii jidhkaaga ayaad ku khasbi kartaa inuu huriyo dufanka jidhka ee madax adag oo aad sannado badan haysay?
Kuwani waa tiro ka mid ah tilmaamayaasha lagu soo bandhigay gudaha tusaha khasaaraha baruurta dhulka hoostiisa laga saaray ee laga mamnuucay Amazon.
Qaar ka mid ah nafaha geesiyaasha ah ayaa adeegsaday istiraatiijiyaddan hagitaankan dhulka hoostiisa ah si ay si dhakhso ah ugu dhacaan 10, 20, xitaa 30 rodol oo dufan ah dhowr toddobaad gudahood.
Qoraaga buuggan wuxuu soo saaray buug-gacmeedkiisa ka dib markii uu ku dhacay 13 rodol oo uu galay hoos u dhigga dufanka jirka ee hal-lambar wax ka yar bil. Isla markiiba waad arki doontaa sababta ay muhiim u tahay haddii aad gacmahaaga ku heli karto nuqul buuggan ah. Raadinta buugan ma ahayn shaqo fudud maadaama ay runtii mamnuuc ka tahay ilaa dhowaan…
Sababta oo ah su'aasha is khilaafsan ee su’aasha isweydiinta leh ee barnaamijkaan, ayaa mar dambe lagu bixiyaa Amazon isla markaana kama soo qaadan kartid nuqul buuggan dukaannada buugaagta ee deegaankaaga. Facebook xitaa wuxuu ka takhalusay bog shaqsiyeedka qoraaga! Qaabkan dhulka hoostiisa waxaa soo saaray Matt Marshall oo ah macalin jimicsi shaqsi shatti leh leh. Hagahan, Matt wuxuu shaaca ka qaadayaa sida ugu badan ee waxkasta oo aad ka baratay miisaanka oo yaraada ay gabi ahaanba been u tahay.
Waa tan liiska waxa ku jira buuggan…
44-Saacadood quusashadu waxay bilaabmaysaa - sida loo lumiyo ilaa 8.8 rodol 44-kii saacadood ee ugu horreeyay oo aad ugu mahadceliso tijaabo aan caadi ahayn
Habka dabiiciga ah ee loogu kordhinayo wakiilka hormoonkaaga 512%.
Sida loo isticmaalo aalkolada (haddii aad doorato inaad cabto taas) si loo dardar-geliyo dufanka baruurta habeenkii. * Xusuusin: tilmaantan kaligiis ayaa u qalma qiimaha gelitaanka dad badan. Haddii runtii waligaa laguu sheegay inaad ubaahantahay inaad ka dhaarato aalkolada si aad caloosha u darto, waxay umuuqataa waalli. Xaqiiqdu waxa weeye inay jirto hal maroojin oo fudud oo aad isticmaali karto si aad wali khamriga u cabto oo aad caloosha ugu adkaato oo caloosha ugu adkaysato.
Waa maxay sababta qaar ka mid ah naqshadaha jimicsiga jirka ee dunida ugu ruxan ay calali xanjo nikotiin (tani waa ikhtiyaari, UMA baahnid inaad iskudaydo istiraatiijiyaddan su'aal la iska weydiinayo) si ay u soo baxaan.
Sida loo burburiyo 'wareegga naxariis darrada' ee jahwareerka ah 'kaas oo dadka badankiisa ka dhigaysa kuwo aan ku qanacsanayn oo dufan lahayn.
Waa maxay sababta calaacalida asbiriin ilmaha ka hor jimicsigaaga xiga runtii ay u kordhin karto habka dheef-shiid kiimikaadkaaga.
Sidee milyaneer milyaneer ah oo milkiile ah u go'aamiyay "khayaamo" aan caadi ahayn oo kuu oggolaanaya inaad ka hortagto miisaanka halista ah ee miisaanka lumay, iyo sida aad u nuqulan karto farsamadan oo lacag la’aan ah.
Fadlan la soco: Waxaad raadineysaa midkasta oo ugu dambeeya talooyinkaan la isweydiin karo ee ku jira tilmaamahan hase yeeshe UMA baahnid inaad isticmaasho mid kasta oo ka mid ah soojeedinta kaa cabsi gelisa.
Sida loo isticmaalo "riyooyin aan nadiif ahayn" oo miisaan lumis ah.
Isticmaal Pint Geedka: Matt ee 'jalaatada jalaatada' ee aan caadiga ahayn ee runtii kuu oggolaaneysa inaad baabi'iso bint jalaatada oo dhan… oo aad toosiyo maalinta ku xigta.
Farshaxanka "Marshall-mode / binge-mode" ee farsamooyinka lagu helo caloosha iyo INAAD ku soo kordhiso nidaamka dheef-shiid kiimikaad markasta oo aad khiyaameyso. (Haa, WAA INAAD khiyaameysato).
Qodobka ugu dambeeya waa mid aan gorgortan geli karin. Waxaad u baahan tahay inaad khiyaameyso qorshahan khasaaraha baruurta ee dhulka hoostiisa ku jira. Waxaa laga yaabaa inaad hore u soo ogaatay maalmihii khiyaamada, si kasta oo ay tahay xaqiiqda dhabta ahi waxay tahay in maalmaha khiyaameeya ay kaa dhigi doonaan inaad baruur yeelato HADDII aad raacdo habka Matt ee bogga 57.
Sidee cuntooyinka "xun" sida buuqa, liisanka cas iyo xitaa biirka ayaa ku siin kara indhaha indhaha.
Sababta ugu badan ee jimicsigu ay si fudud jidhkaaga u bartaa sida loo xajisto dufanka… iyo sida loo “khiyaaneeyo” jidhkaaga u gubo baruur aad u dhakhso badan iyadoo aan lahayn “jimicsiga xad dhaafka ah”.
Nolosha Lean ee nolosha: Matt hab aan caadi aheyn oo loogu talagalay “ka soo bixida” qorshahan cunnada ee dammaanad ka qaadanaya inaadan dib uga soo kicin miisaankaagii kaa lumay… adiga oo aan lagaaga baahnayn inaad ku sii noolaato qorshaha cuntada inta hartay ee harsan.
Sababta caadiga ah ee cunaysa borotiinka xad-dhaafka ah - haa, xitaa borotiinka jilicsan - waxay si aan caadi ahayn u adkaynaysaa shakhsiyaadka caadiga ah inay caano-fadhiistaan.
Xaqiiqada: Intooda badan macaamiisha Matt runtii way kiciyaan XAQIIJINTA lacag caddaan ah mahadsanid soo jeedinta bogga 42. Xitaa haddii aad ku bixin laheyd nasiib maalintan tilmaan-bixiyaha maanta, runti waad badbaadin laheyd mustaqbalka fog.
Waa tan waxa….kama iibsan kartid buugga luminta baruurta meel kasta laakiin halkan waa!
Marka lagu daro Buug-yaraha Khasaaraha ee Dhulka Hoostiisa ku jira, waxaad fursad u heli doontaa cinwaanka e-mailka Matt Marshall shakhsiyeed, fursad inaad ku guuleysato abaalmarinta lacageed ee 10x "Waxaan Laba-Dog Dare ah", iyo sidoo kale 3 kale oo buugaag ah oo ah Matt Marshall buugagga oo bilaash ah dalabkaaga oo xadidan oo keliya!
Waxaad heli doontaa Barnaamijka Shaqada 10-3-X, Ageless Abs, iyo 60 XNUMX Hoormone Fix.
Ma la yaaban tahay inta qarashkan oo dhan? Waxaad isla markiiba heli doontaa hagitaan hagahan oo keliya hal lacag bixin oo ah $ 19.95.
Adigoo adeegsanaya farsamooyinka ku jira buugga 'Fat Wajiga luminta' ee dhulka hoostiisa ah, waqti iskuma noqon kartid. Waxaad sidoo kale heli doontaa 3 buugaag oo gunno ah oo aan ku soo sheegnay BILAASH!
Intaas waxaa sii dheer waxaad helaysaa 60 maalmood oo buuxa oo aad waxkasta ku eegtid oo aad go aansato in hagaha uusan adiga kugu habboonayn sabab kasta ha noqotee, waxaad lacagtaada ku soo celin kartaa!
Afeef: Boggan internet-ka iyo blog-ka ayaa loogu talagalay inay noqdaan ilo macluumaad oo keliya, oo aan loogu dhisin talo caafimaad.
Macluumaadka halkan lagu siiyay waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad gaarto go'aanno wargelin ah oo ku saabsan caafimaadkaaga. Looguma talogalin inuu ku beddelo daaweyn kasta oo laga yaabo inuu dhakhtarkaagu kuu qoro.
Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto dhibaato caafimaad, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad raadsato caawimaad caafimaad oo karti leh.
Siidaynta Affilaite: Qaar ka mid ah xiriirada websaydhadeena waa xiriirro xiriir la leh. Tan macnaheedu waa haddii aad gujiso xiriirinta oo aad iibsato shayga, waxaa suuragal ah inaan helno guddi xiriir la leh oo aan kharash dheeraad ah adiga kuugu fadhiyin. Dhammaan fikradaha ayaa iska leh annagana waxaan ku talinaynaa oo keliya alaabada iyo / ama adeegga aan aaminsanahay inay qiimo u yeelan doonaan akhristayaashayada.